I-Quiet Villa Aquarama 3 - 2br - Sanur Beach - I-Airbnb
I-Quiet Villa Aquarama 3 - 2br - Sanur Beach
Sanur, BALI, i-Indonesia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Ketut
U-Ketut uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
U-92% wezivakashi zakamuva unikeze u-Ketut izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-villa ethule enama-suites angu-2 abazali afaneleka kahle izivakashi ezi-2 noma ezi-4. I-infinity pool, i-1m40 ejulile enephansi eliyisicaba, elibheke ingadi enakekelwa kahle. Indawo enhle eSanur, emgwaqeni othule ongaphansi kwemizuzu emi-5 ngokuhamba ngezinyawo usuka ogwini, izindawo zokudlela, izitolo, isuphamakethe ...
Le villa itholakala endaweni evikelekile, kude nemigwaqo ephithizelayo. Uzozizwa uphephile futhi ujabule ngesikhathi uhlala ngokuphepha ebusuku. I-complex inezingadi ezilungiswe kahle futhi umuzwa ovulekile kakhulu.
4.76 · 144 okushiwo abanye
I-Villa Aquarama isendaweni ethule, nasemgwaqweni okhangayo lapho iningi lezakhiwo kuyizindlu ezinhle. Ama-warung amaningana (izindawo zokudlela zasendaweni) aseduze futhi ungathola kalula ukunambitha ukudla okumangalisayo kwesi-Indonesia.
U-Ferra, umphathi wethu wendawo wase-indonesian okhuluma isiFulentshi nesiNgisi, ukhona ukusiza amakhasimende ukugcwalisa izidingo zawo. Uma ufuna ukuthola i-Bali noma uzame nje ukuphumula eduze kwase-Sanur, angakusiza ukuthi uthole isixazululo, (ngezindleko ezengeziwe).
U-Ferra, umphathi wethu wendawo wase-indonesian okhuluma isiFulentshi nesiNgisi, ukhona ukusiza amakhasimende ukugcwalisa izidingo zawo. Uma ufuna ukuthola i-Bali noma uzame nje uk…
Hlola ezinye izinketho ezise- Sanur namaphethelo